Roobow oo shuruud adag ku xiray HESHIIS loo soo bandhigay si loo sii daayo – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Roobow oo shuruud adag ku xiray HESHIIS loo soo bandhigay si loo sii daayo
by Mohamed Abdirashid Abaajo 7th February 2019 029
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laft-gareen) ayaa shalay xabsiga Habar-Khadiijo ee ciidamada NISA ku booqday Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu-Mansuur, oo u xiran dowladda.
Kulanka ayaa la sheegay in looga hadlay dadaallo ay wadday beesha Roobow iyo wada-hadal ay la lahayd dowladda oo ku saabsan in lasii daayo Roobow, dowladdana xaal-marin ka bixiso dhibkii ka dhacay magaalada Baydhaba.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Lafta-gareen uu Roobow ku war-geliyey qaar ka mid ah qodobada heshiis la diyaarinayo in lagu xaliyo dhibkii dhacay, islamarkaana lagu sii daayo Roobow.
Waxyaabaha Roobow loo ballan-qaaday ayaa waxaa ka mid ah, In lasii daayo dowladana ay xaal-marin siiso, halka dhibanayaasha dhibkii Baydhaba ay heli doonaan magdhow. Waxaa sidoo kale loo sheegay in la qabanayo shir looga xaajoonayo dhibkii gaaray Abuu-Mansuur isaga iyo kooxdiisa ololaha.
Si kastaba, Roobow ayaa la sheegay inuu diiday heshiiska, isaga oo dalbaday in la helo gacan saddexaad, oo ay u badan tahay inay tahay beesha caalamka, oo damaanad qaada heshiiska, isaga oo sheegay inuusan dib dambe u aamineyn dowladda federaalka, oo heshiis hore uga baxday, sida uu ku dooday.
Lafta-gareen ayaa la sheegay inuu dalabka Roobow kula laaban doono madaxda dowladda, hase yeeshee ilo-wareedyo ku dhow xukuumadda ayaa sheegay in dowladda aysan marnaba aqbali doonin gacan saddexaad oo soo dhex-gasha arrintan.
Maareeyihii DP World ee Bosaaso lagu dilay oo war kusoo kordhay Diintiisa hadana sheegay inta ladilin in oo…
“Sahanka aan ku sameynay Shidaalka Soomaaliya lacagteena ayaa naga gashay”
Dhagayso:- Golaha Xukuumada Soomaaliya oo ka dooday Heshiiska ay AMISOM ku joogto Soomaaliya.
Shirkadda diyaaraddaha ee AIR DJIBOUTI oo diyaarad Boeing 737 so ibsatay.
admin 13th August 2016 13th August 2016
DAAWO:-Fanaanada Shamis Qarda-Jeex oo aflagaado u geysatay Sheekh Daahir Aw Cabdi, (SABABTU MAXAY TAHAY ? )